देशका लागि स्वर्ण जित्‍ने खेलाडीहरू चिन्‍नुस् - खेलकुद - नेपाल
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकूद (साग) मा नेपाल ५१ स्वर्णसहित दोस्रो भएको छ । भारत १६५ स्वर्णसहित पहिलो र श्रीलंका ३९ स्वर्णसहित तेस्रो भएको छ ।
महिला टीम काता (कराँते) र महिला टीम पुम्से (तेक्‍वान्दो) ले एक/एक स्वर्ण जितेका छन् भने फुटबलमा पनि नेपालले भुटानलाई हराउँदै स्वर्ण जितेको छ । ४० खेलाडीले देशका लागि स्वर्ण चुमेका छन् । यी मध्ये गौरिका सिंह (पौडी) ले सर्वाधिक ४ स्वर्ण जितेकी छन् । मण्डेकाजी श्रेष्ठ (कराँते) र आयशा शाक्य (तेक्‍वान्दो) ले दुई/दुई स्वर्ण जितेका छन् । देशका लागि स्वर्ण जित्ने यी खेलाडीहरू सानो संघर्षले यहाँ आएका होइनन् । पढ्नुस् उनीहरूको खेल यात्राः
सन्तोषी श्रेष्ठ (एथ्लेटिक्स)
तस्बिरः रवि मानन्धर
१३ औँ संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सन्तोषीले कीर्तिमानी स्वर्ण जितेकी छन् । एथ्लेटिक्सको १० हजार मिटरमा उनले जितेको स्वर्ण छोटो दूरीमा नेपालले जितेको पहिलो स्वर्ण हो, महिलाको नाममा । यो विधामा कोलम्बो सागमा सन् २००६ मा कान्छीमाया कोजुले रजत पदक जितेकी थिइन् । त्यही बेला कान्छीमायाले निकालेको ३५ मिनेट ०३ दशमलव ४३ सेकेन्डको टाइमिङ अझै पनि राष्ट्रिय कीर्तिमानका रूपमा कायम छ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदकी ५ हजार मिटर दौडकी विजेता सन्तोषीले नेपाली एथ्लेटिक्सको सात दशकको इतिहासमा महिलातर्फ पहिलो स्वर्ण दिलाएर राष्ट्रलाई ठूलै गुन लगाएकी छन् ।
भारतीय खेलाडी कविता आफूले दौड पूरा गर्नेमा विश्वस्त थिइन् । तर सन्तोषीले फुटपावर यसरी बढाइन् कि कविताले जीतको खुसी मनाउँदै गर्दा उनलाई पछि छाडिन् । सन्तोषीको टाइमिङ ३५ मिनेट ०७ दशमलव ९४ सेकेन्ड रह्यो । कविताको टाइमिङ ३५ मिनेट ०७ दशमलव ९५ सेकेन्ड रहन गयो । खेलमा जीतको खुसीयाली मनाउन हतार गर्नुहुन्न भन्ने नमीठो पाठ कविताले सिकिरहँदा नेपालकी सन्तोषी भने अन्तिम समयसम्म पनि हार मान्नुहुन्न भन्नेमा अडिग रहिन् । आखिर जीत सन्तोषीकै आत्मविश्वासको भयो ।
हारपछि कविताले भनिन्, “अन्तिम समयसम्म म नै विजेता हुन्छुजस्तो लागेको थियो । अन्तिम ५० मिटरमा आउँदा त मेरो आत्मविश्वास पनि ह्वात्तै बढेको थियो । तर सन्तोषीले लेन परिवर्तन गरेपछि म आत्तिएँ । किन यस्तो गर्दै छिन् भनेर मैले सोच्न नभ्याउँदै उनले रेस पूरा गरिन् । म माइन्ड गेममा उनीसँग हार्न पुगेँ ।”
प्रतियोगितामा दौडिनुअघि सन्तोषीले सेन्थिटिक ट्रयाकमा राम्ररी अभ्यास गर्न पनि पाएकी थिइनन् । विनाशकारी भूकम्पपछि पुन:निर्माण गरिएको दशरथ रंगशाला यही सागका लागि तयार पारिएको हो । तर उद्घाटनअघि खेलाडीको अभ्यासका लागि त्यो खुला थिएन । उनलाई पनि स्वर्ण जित्छु भन्ने कहीँ–कतै लागेको थिएन । भन्छिन्, “दौड सकिएपछि के म पहिलो भएँ त भन्ने जिज्ञासा र कुतूहल मनमा उब्जिरह्यो । आँखा खुला राखेर पनि कैयौँ पटक मैले स्वर्ण जितेको सपना देखेकी थिएँ । तर त्यही सपना साकार भएको क्षण म आफैँलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ ।”
२५ ल्यापसम्म लिड गरेर दौड पूरा गर्नु पनि अविस्मरणीय हो । यसअघि एउटै पनि औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग नलिएकी सन्तोषीसँग आमन्त्रण प्रतियोगिता खेलेको अनुभव छ । त्यस हिसाबले उनी शून्यबाट पलाएकी प्रतिभा हुन् । “सपना देख्न छाड्नु हुन्न रहेछ,” गलामा पहिरिएको स्वर्ण पदक सुमसुम्याउँदै भावुक मुद्रामा उनले भनिन्, “सपना नै देखिएन भने त्यसलाई पूरा गर्ने आत्मविश्वास पनि पलाउँदो रहेनछ ।”
यो पनि पढ्नुस्ः शून्यमा पलाएकी सन्तोषी
दीपक हमाल (उसु)
बेलायती सेनामा भर्ना हुन सफल भए दीपक यति खेर कुनै ब्यारेकमा ड्युटी गरिरहेका हुन्थे । तर, असफलतापछि सिक्न थालेको उसुले उनलाई १३ औँ सागमा स्वर्णधारी बनायो । उसुको थाउलोतर्फको नानक्वानमा उनले १९.३२ अंकसहति स्वर्ण जितेका हुन् । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण जितेका उनी अब सफलताको अध्यायले रफ्तार लिनेमा आशावादी छन् ।
सक्षम कार्की (तेक्‍वान्दो)
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित तेक्‍वान्दो हलमा तेक्‍वान्दोको ग्योरोगी ८७ केजी तौल समूहमा सक्षम कार्कीले स्वर्ण जित्दा अर्को कीर्तिमान पनि बन्यो । त्यो थियो, सागमा नेपालले स्वर्ण संख्या १ सय पुर्‍याएको कीर्तिमान । हुन पनि नेपालले सबैभन्दा बढी ६४ स्वर्ण घरेलु भूमिमै जितेको छ । टीन एजमै सन् २०१४ को एसियाली खेलुकदमा सहभागिता जनाएका सक्षम अघिल्लो सागका रजत बिजेता हुन् । चोटकै कारण उनको ३ पटक त शल्यक्रिया भइसकेको छ । तर स्वर्ण जितेपछि उनले अब कम्तीमा विदेश पलायन नहुने सपनालाई अठोट बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
अनुपमा मगर (कराँते)
१३ वर्षको उमेरमै सशस्त्र माओवादी विद्रोहमा होमिएकी अनुपमा मगरले सिन्धुलीको शिविरमै कराँते सिकेकी हुन् । त्यसो त उनी लडाकुका रूपमा नभई कलाकारका रूपमा माओवादी विद्रोहमा सामेल भएकी थिइन् । पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी जनमुक्ति सेनाबाट कराँतेमा सहभागी भएर कास्य जितेकी अनुपमाले १३ औँ सागमा भने आफ्नो नाममा स्वर्ण लेखाइन् । अनुपमाको स्वर्ण यात्रा कम्तीको रोचक रहेन । अघिल्लो महिना बंगलादेशमा भएको कराँतेको दक्षिण एसियाली च्याम्पियनसिपमा रजतमा सीमित अनुपमा फाइनलमा श्रीलंकाली कुलाथुंगा ब्रान्दासँग पराजित भएकी थिइन् । तर, सागमा भने अनुपमाले तिनै ब्रान्दालाई हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरिन् । बलियो मानिएको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानी नर्गिस, जो जाकर्ता एसियाडकी पदक विजेता समेत हुन्, लाई हराएर अनुपमाले स्वर्ण जितिन् । जीवनको पहिलो दक्षिण एसियाली स्वर्ण उनले एक दशकअघि यो संसारबाट बिदा भइसकेकी आमाको नाममा समर्पित गरिन् । “आमाले माओवादी विद्रोह र खेलकुद दुवैमा नलाग भन्नुभाथ्यो,” अनुपमाले भनिन्, “उहाँले नलाग भनेको क्षेत्रबाट सफलता पाउँदा उहाँ नै मेरो साथमा हुनु भएन । यो पदक मेरी आमाको नाममा ।”
निस्मा श्रेष्ठ (साइक्लिङ)
साइक्लिङबाट नेपाललाई पहिलो सहभागितामा नै स्वर्ण दिलाउने खेलाडी हुन्, निस्मा श्रेष्ठ । उनले स्वर्ण जितेको १ घन्टापछि राजेश मगरले पुरुष विधामा अर्को स्वर्ण थपे । सन् २०१० र ०१६ मा भएको सागमा रोडरेस मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । निस्मा डाउनहिल विधामा प्रतिस्पर्धा गर्ने एक्ली महिला राइडर हुन् ।
राजेश मगर (साइक्लिङ)
नेपाललाई साइक्लिङमा दोस्रो स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी हुन्, राजेश मगर । पुरुष डाउनहिलमा राजेशले १ किलोमिटरको रेस एक मिनेट ५१:१२४ सेकेन्डमा पूरा गर्दै साइक्लिङबाट स्वर्ण जिते । उनी सन् २०१४, ०१६, ०१७ र ०१८ का डाउनहिलका नेसनल च्याम्पियन पनि हुन् ।
संगीता बस्याल (तेक्‍वान्दो)
१२ औँ सागको छनोटमा आयशा शाक्यसँग पराजित संगीता बस्यालको सागमा खेल्ने सपना पूरा हुन पाएन । तर, उनै आयशा केही समय तेक्‍वान्दोमा निस्क्रिय हुँदा संगीताले राष्ट्रिय टोलीमा पर्ने अवसर पाइन् र जकार्ता एसियाडको अनुभव बटुलिन् । सागको पहिलो सहभागितालाई यादगार बनाउने क्रममा यिनले भारतकी खेलाडीलाई हराएर स्वर्ण जितिन् ।
विजय सिंजाली (उसु)
अघिल्लो संस्करणको सागमा रजतमा चित्त बुझाएका विजय सिंजालीले घरेलु भूमिमा भने स्वर्ण नै हात पारे । पुरुषतर्फको छानछ्वानमा स्वर्ण जित्दा उनले कुल १० अंकमा ९ दशमलव ४८ अंक जोडे । अघिल्लो सागमा सोचअनुसारको प्रदर्शन गर्न नसकेर रोएका विजयले यस पटक भने लगनखेलस्थित नेपाली सेनाको शारीरिक तथा खेलकुद तालिम केन्द्रमा खुसीको आँसु खसाले ।
सुस्मिता तामाङ (उसु)
महिला छानछ्वानमा ९ दशमलव ४४ अंक बटुलेकी सुस्मिता तामाङले पनि सिलोङ सागमा जितेको रजतलाई काठमाडौँमा स्वर्णमा बदलिन् । जम्पिङ र मुभमेन्टमा उल्लेख्य सुधार गरेकी सुस्मिता ०६८ को छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यता अपराजित छिन् ।
हिमाल टमाटा (दुवाथलन)
आयोजकले दिएको पोसाक फिट नभएपछि अर्काकै पोसाक लाएर खेलेका महेन्द्रनगरका हिमाल टमाटाले दुवाथलनमा स्वर्ण जिते । ६ वर्ष पुरानो साइकलको सहारामा यिनले २० किलोमिटर साइक्लिङ सकाए । पुरुष स्प्रिन्ट विधाको निर्धारित दूरी ५७ मिनेट ३३ सेकेन्डमा पार गर्दै उनले स्वर्ण जितेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुस्ः चेन्जिङ रुमदेखि पारिश्रमिकसम्म महिला खेलाडीमाथि विभेद
सन्जु चौधरी (भारोत्तोलन)
भारोत्तोलनको महिला ५९ केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी हुन्, सन्जु चौधरी । सन्जुले स्न्याचतर्फ ७४ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ९७ केजीसहित कुल १ सय ७१ केजी तौल उचाल्दै स्वर्ण हात पारेकी हुन् । महिला भारोत्तोलनको विधागत संस्करणबाट सागमा भित्रिएको हो । सन्जुको भने यो पहिलो साग सहभागिता हो । नेपाली भारोत्तोलनकै इतिहासमा यो मात्र दोस्रो स्वर्ण हो । महिलातर्फ भने भारोत्तोलनमा स्वर्ण जित्ने सन्जु पहिलो खेलाडी हुन् । पुरुषतर्फ कमलबहादुर अधिकारीले यसअघि सन् २०१० को कोलम्बो सागमा स्वर्ण जितेका थिए ।
जुनी राई (उसु)
उसुको सान्सौ (फाइट) ५६ केजी तौल समूहमा जुनी राईले नेपाललाई स्वर्ण दिलाइन् । जुनीले श्रीलंकाकी मदुमालीलाई २–० ले हराउँदै स्वर्ण पदक पक्का गरेकी हुन् । उनले पहिलो चरणमा भारतीय खेलाडी विद्यावती चानुलाई २–० ले हराएकी थिइन् । उसुको सान्सौमा सन् २००६ यता नेपालले स्वर्ण जित्न सकेको थिएन । राजकुमार रसाइलीले कोलम्बो सागमा उसुको सान्सौमा स्वर्ण दिलाएका थिए । त्यसपछि स्वर्ण जित्ने जुनी पहिलो खेलाडी हुन् । सान्सौतर्फ ५ नेपाली खेलाडीले फाइनलमा स्थान बनाए पनि स्वर्ण भने जुनी राईले मात्रै चुमिन् ।
निमा घर्तीमगर (उसु)
सागमा लगातार दुई स्वर्ण जित्ने टीनएजर खेलाडी हुन्, निमा घर्तीमगर । १६ वर्षकै उमेरमा उनले अघिल्लो सागमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकी थिइन् । उसुमा २ स्वर्ण जित्ने निमा एक्ली खेलाडी हुन् । उसुको नानछ्वानमा उनले कुल २० मा १८ दशमलव ९१ अंक स्कोर गरिन् । यसअघि १२ औँ सागमा स्वर्ण जित्दा उनको स्कोर १६ दशमलव ९१ थियो । भन्छिन्– “स्वर्णका लागि खेल्छु भन्ने थियो । प्रकाश लामा गुरुले फेरि स्वर्ण जित्दा कीर्तिमान बन्छ भनेर हौस्याउनु भयो । त्यहीअनुसार मिहेनत गरेँ ।” २ वर्षको अन्तरमा साग आयोजना भने भर्खर १९ वर्ष लागेकी निमाले उसुमा थुप्रै कीर्तिमान बनाउन सक्ने प्रशिक्षक प्रकाश बताउँछन् ।
पौडी अन्तर्गत ४ सय मिटर फ्रि–स्टायलमा स्वर्ण जित्दै नेपाली पौडीबाज गौरिका सिंहले एकै सागमा ४ वटा स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान कायम गरेकी छन् । १७ वर्षीया पौडीबाज गौरिकाले ४ सय मिटर फ्रि–स्टायलमा ४ मिनेट २५ दशमलव २८ सेकेण्डको टाइमिङ निकालिन् । उनले तेस्रो स्वर्ण जितेपछि खुशी र आश्चर्य दुबै लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘कीर्तिमान बन्यो भन्ने कुरा मैले त स्वर्ण जितिसकेपछि मात्रै थाहा पाएँ, उनले भनिन्, ‘पहिलो स्वर्ण मेरो देश नेपाललाई, दोस्रो माइती नेपाल संस्थालाई र तेस्रो मेरो हजुरबुवा लोकभक्त राणामा समर्पित गर्छु ।’
सागमा एउटै खेलमा चार स्वर्ण जित्ने उनी एक्लो नेपाली खेलाडी हुन् । यसअघि म्याराथन धावक बैकुण्ठ मानन्धर र तेक्वान्दोकी आयशा शाक्यले सागमा तीन स्वर्ण जितेका छन् । सागमा लगातार चारवटा स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान दीपक बिष्टको नाममा छ । उनले आठौं, नवौं, दशौं र एघारौं संस्करणको सागमा तेक्वान्दोतर्फ स्वर्ण जितेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस्ः १३ औँ सागमा ५० स्वर्ण जित्ने लक्ष्य पूरा गर्ला नेपालले ?
पौडीमा गौरिकाले अर्को स्वर्ण पदक पनि जितिन् । शुक्रबार गौरिकाले २ सय मिटर २ मिनेट १७.७३ सेकेन्डमा पार गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन् । सन् २०१६ को रियो ओलम्पिककी कान्छी ओलम्पियन बनेर चर्चाको शिखरमा पुगेकी गौरिकाले आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा १२ स्वर्ण जित्दै इतिहास रचेकी थिइन् । उनले आफ्नो पदक नेपाल र नेपालीको नाममा समर्पित गरेकी छन् । भनिन्– “मलाई धेरैले तिमी नेपाली होइन भन्नुहुन्छ, तर म नेपाली हुँ । म बाहिर बसे पनि नेपालकै लागि खेल्ने हो । मैले जितेको पदक सारा नेपाली र देश नेपालको लागि हो ।”
वीरबहादुर महरा (तेक्‍वान्दो)
तेक्‍वान्दो ग्यारोगीअन्तर्गत पुरुष ६८ केजीमुनि तौल समूहमा वीरबहादुर महराले नेपाललाई स्वर्ण दिलाए । फाइनलमा वीरबहादुरले पाकिस्तानका मुहम्मद फहिमलाई ४१–३६ ले पराजित गर्दै स्वर्ण जिते । उनले भारतका पृथ्वीराज चौहानलाई ३२–२४ ले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएका थिए ।
काजल श्रेष्ठ (तेक्‍वान्दो)
४६ केजीमुनिको तौल समूहअन्तर्गत तेक्‍वान्दोको ग्यारोगीमा स्वर्ण जितेपछि काजल श्रेष्ठले ११ वर्षदेखि साउदी अरबमा रोजगारीका क्रममा रहेका बुवा डम्बर श्रेष्ठलाई सम्झिइन् किनभने उनको सफलतालाई आँखैले देख्नेमा आमा मात्रै थिइन् । फाइनलमा पाकिस्तानकी साइद जादी बटुललाई ५०–१४ ले हराउँदै उनले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक हात पारिन् । पहिलो चरणमा उनले भारतकी राधा भाटीलाई ५०–३९ ले हराएकी थिइन् ।
बुद्धिबहादुर तामाङ (साइक्लिङ)
साइक्लिङबाट १३ औँ सागमा नेपालले ४ स्वर्ण जित्दा बुद्धिबहादुर तामाङले क्रस कन्ट्रीको ४ किलोमिटरमा स्वर्ण जितेका हुन् । बुद्धिबहादुरले १ मिनेट १९. ०८ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरे । यो विधामा रजत र कास्य पनि नेपालले नै जित्यो ।
लक्ष्मी मगर (साइक्लिङ)
महिला क्रस कन्ट्री स्पर्धामा नेपालकी लक्ष्मी मगरले स्वर्ण जितिन् । गोकर्णमा भएको साइक्लिङमा लक्ष्मीले क्रस कन्ट्रीको ४ किलोमिटरमा स्वर्ण जितेकी हुन् । लक्ष्मीले निर्धारित दूरी १ मिनेट २०.२० सेकेन्डमा पूरा गरिन् ।
कुसुम खड्का (कराँते)
४५ केजी तौल समूहको कुमुतेमा स्वर्ण जित्ने क्रममा कुसुमले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । बंगलादेशकी सेनारथको कडा चुनौतीलाई चिर्दै कुसुमले सागमा व्यक्तिगत स्वर्णको खाता खोलिन् । नेपाली कराँतेकी उदीयमान खेलाडी कुसुमले त्यसअघि श्रीलंकाली खेलाडीलाई भने सजिलै हराएकी थिइन् ।
सीना मादेन लिम्बू (तेक्‍वान्दो)
तेक्‍वान्दोको पुम्सेमा स्वर्ण जित्ने पहिलो महिला खेलाडी सीना मादेन लिम्बूले १७ देखि २३ वर्ष महिला उमेर समूहको स्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गरेकी हुन् । उनले ८ दशमलव १५० स्कोर गरिन् । राष्ट्रिय स्तरमा निकै राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएकी उनले भारतीय प्रतिद्वन्द्वीलाई पछि छाडिन् । तेक्‍वान्दोमा भारतीय खेलाडीहरू निकै बलिया मानिन्छन् ।
विप्लवलाल श्रेष्ठ (कराँते)
कराँतेको ८४ केजी माथिको स्पर्धामा उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुन् विप्लवलाल श्रेष्ठ । फाइनलमा पाकिस्तानी खेलाडीलाई ६–५ ले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेका उनले ०–२ र ३–४ ले पछि परेको अवस्थालाई उल्टाएका थिए । खेल आफ्नो पक्षमा पार्न उनले २ पटक वाजरी प्रहार गरे । सेमिफाइनलमा पनि उनले श्रीलंकाली खेलाडीलाई ८–० का स्कोर गर्दै टेक्निकल आधारमा पराजित गरेका थिए ।
पार्वती गुरुङ (तेक्‍वान्दो)
तेक्‍वान्दोके पुम्सेतर्फको २३ देखि २९ वर्ष समूहमा पार्वती गुरुङले नेपाललाई स्वर्ण दिलाइन् । तर, उनको स्वर्ण निकै प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो । पार्वतीले ८ दशमलव २५० स्कोर गर्दा दोस्रो भएकी श्रीलंकाली खेलाडीले ८ दशमलव ०३० स्कोर गरिन् । गुरुहरूले सिकाएअनुसार नै खेल्दा पदक मिलेको बताउने पार्वती आफ्नो स्वर्ण पदक राष्ट्रमा समर्पित गर्छिन् ।
लक्ष्मण तामाङ (कराँते)
कराँतेको कुमुते विधामा यसपटक पहिलो स्वर्ण दिलाउने खेलाडी हुन्, लक्ष्मण तामाङ । ५४ केजीमुनि तौल समूहमा बंगलादेशका प्रतिद्वन्द्वीलाई १–० ले हराएर उनले स्वर्ण जिते । बंगलादेशी प्रतिद्वन्द्वीले सुरक्षित खेल्न खोज्दा बटुलेको १ अंक नै लक्ष्मणका लागि स्वर्ण दिलाउन पर्याप्त भएको थियो ।
१३ औँ सागमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाउने पहिलो महिला खेलाडी हुन्, सोनी गुरुङ । ट्रायथलनको ७ सय मिटर पौडी, २० किलोमिटर साइक्लिङ र पाँच किलोमिटर दौड पूरा गर्न सोनीले १ घन्टा १३ मिनेट ४५ सेकेन्ड लगाइन् । उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका भारतीय र श्रीलंकाली खेलाडीले कडा टक्कर दिए पनि ३ विधामै सुरुबाटै उनले बनाएको अग्रता अन्तिम समयसम्म कायम रहँदा उनको स्वर्ण थप मजबुत भएको थियो ।
महिला टीम काता (कराँते)
मार्सल आर्ट्समा पनि कराँतेमा नेपालको भिन्नै शान छ । आठौँ संस्करणको काठमाडौँ सागमा भित्रिएको कराँतेको पदकले नेपाललाई पदकतालिकाको दोस्रोमा उभ्याएको थियो । त्यसअघि र यता नेपालले सो सफलता चाख्न सकेको छैन । यसपटक नेपाली महिला टोलीले करातेमा आफू निकै बलियो भएको प्रमाण पेस गर्न टीम कातामा स्वर्ण जिते । नेपाली टोलीका सदस्यमा संगीता मगर, सरु कार्की र निर्मला तामाङ थिए ।
महिला टीम पुम्से (तेक्‍वान्दो)
२३ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको महिला पुम्सेमा नेपाली महिला टोलीले स्वर्ण जित्यो । पुम्सेमा नेपाली टोलीको एकछत्र राज हुँदा महिला टोलीमा नीता गुरुङ, प्रशंसा क्षत्री र सुशीला राई अटाए । उनीहरूले ७ दशमलव ९२० अंक स्कोर गरे ।
कमल श्रेष्ठ (तेक्‍वान्दो)
तेक्‍वान्दोका अनुभवी खेलाडी हुन्, कमल श्रेष्ठ । तर पनि सागमा स्वर्ण जित्ने यिनको धोको पूरा हुन पाएको थिएन । यसै पटकबाट थपिएको पुरुष एकल २३ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको पुम्सेमा स्वर्ण जित्ने क्रममा यिनले भारतीय खेलाडीबाट कडा टक्करको सामना गर्नु परेको थियो । कमलले ८ दशमलव २७० स्कोर गर्दा भारतीय खेलाडी राहुल जैनले ८ दशमलव २०० स्कोर गरेका थिए । १३ औँ सागमा तेक्‍वान्दोबाट स्वर्णको बोहनी गर्ने खेलाडी पनि कमल नै हुन् ।
तेक्‍वान्दोकै महिला टीम पुम्सेको १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहमा पनि नेपालले स्वर्ण जित्यो । निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको खेलमा नेपालले भारतीय टोलीलाई पाखा लगाएको थियो । निशा दर्नाल, स्वस्तिका तामाङ र सन्जिला तिमल्सिनाले ७ दशमलव ९८० स्कोर गर्दा भारतीय टोलीले ७ दशमलव ९७० स्कोर गरेको थियो । टीम पुम्से यस पटकबाट तेक्‍वान्दोमा थपिएको विधा हो ।
१७ वर्षको उमेरमै गल्फर सुवास तामाङले सागमा नेपाललाई दोहोरो स्वर्ण दिलाए । गल्फको एकल र टीम इभेन्टमा स्वर्ण हासिल गर्दै कम उमेरमा दोहोरो स्वर्ण जित्ने इतिहास कायम गरेका हुन् । सुवासले अन्तिम दिन ३ अन्डर ६९ स्कोरसहित कुल १४ अन्डर २७४ स्कोरसहित प्रथम स्थान हासिल गरे । उनले बंगलादेशका मोहम्मद फरहादलाई ८ स्ट्रोकले पछि पारे । फरहादले ६ अन्डर २ सय ८२ स्कोर जोडे । यस्तै नेपालले टीम इभेन्टतर्फ पनि स्वर्ण पदक पक्का गरेको छ । टीम इभेन्टमा नेपालबाट सुवाससँगै शुक्रबहादुर राई, टंकबहादुर कार्की र निरज तामाङ छन् ।
गोपीचन्द्र पार्की (एथ्लेटिक्स)
पदकका हिसाबले १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा एथ्लेटिक्सको प्रदर्शन उच्च रह्यो । महिला १० हजार मिटरमा सन्तोषी श्रेष्ठले स्वर्ण जितेको ३ दिनपछि पुरुष ५ हजार मिटर दौड गोपीचन्द्र पार्कीले अर्को स्वर्ण जिते । निर्धारित दूरी १४ मिनेट ५४.२० सेकेन्डमा पूरा गर्दै प्रथम स्थान हासिल गरे । उनले भारतका सुनिल दवारलाई करिब १ सेकेन्डले पछाडि पारेका थिए । दौडका दौरान अधिकांश समय शीर्ष तीनमै रहेका गोपीले अन्तिम १ सय मिटरमा मात्र अग्रता लिएका थिए । जितपछि उनले १३ वर्षअघि राजेन्द्र भण्डारीबाट खोसिएको ५ हजार मिटर दौडको स्वर्ण फिर्ता ल्याउन पाएकोमा हर्ष प्रकट गरे । उनले भने, “१३ वर्षअघि राजेन्द्र दाइले सागमा ल्याएको पदक खोसियो भनेर सरले क्याम्पमा सुनाउँदा निकै नमज्जा लाग्यो । त्यही बेला मैले यो स्पर्धामा स्वर्ण जित्ने योजना बनाए । मैले म्याराथन पनि खेलेँ । तर मलाई ५ हजार मिटरमा मिलेको सफलताको तुलना अरुसँग हुँदैन ।”
अनु अधिकारी (कराँते)
११ औँ सागमा स्वर्ण नजिक पुगेर पनि विमुख हुनु परेको पीडालाई कराँतेकी अनु अधिकारीले घरेलु भूमिमा मल्हम लगाउने काम गरिन् । महिला कुमुतेको ५० केजी तौल समूहमा भिडेकी अनुले श्रीलंकाली खेलाडीलाई कुनै मौका नै नदिई ८–० को एकोहोरो नतिजासहित स्वर्ण हात पारिन् । फाइनलमा टेक्निकल नतिजा निकाल्ने उनी एक्ली खेलाडी पनि बनिन् । त्यसैले जितेका स्वर्णमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीका रूपमा अनुको पदकलाई लिन सकिन्छ ।
विकास थापा (भारोत्तोलन)
सागअन्तर्गत भारोत्तोलनको पुरुष ८९ केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी हुन्, विकास थापा । विकासले स्न्याचमा १ सय २३ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा १ सय ४६ केजीसहित कुल २ सय ६९ केजी तौल उचाले । पछिल्लो संस्करणमा रजत जितेका उनले यसपटक प्रदर्शन सुधार गरेका हुन् ।
भूपेन श्रेष्ठ (तेक्‍वान्दो)
पुरुष तेक्‍वान्दोमा नेपालका भूपेन श्रेष्ठले स्वर्ण जिते । ग्योरोगीको ८७ किलोमुनिको तौल समूहमा भूपेनले भारतका अक्षय होडालाई २९–२६ अंकले पराजित गर्दै स्वर्ण जिते ।
सुनीता महर्जन (कराँते)
२६ वर्षीया सुनीता महर्जनले कराँतेको कुमुतेको ६८ केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितिन् । पाकिस्तानी खेलाडीलाई फाइनलमा सहजै पराजित गर्दै सुनीताले स्वर्ण जित्दा उनका बुवा सातदोबाटोको कराँते हलमा पुग्न भ्याएनन् । पेसाले माली रहेका नाति महर्जनले छोरीको सफलतालाई सबै नेपाली छोरीहरूको सफलता भनेर अथ्र्याए । स्वर्णसहित बुवाको अँगालोमा पुग्दा सुनीताको आँसु थामिएनन् ।
नवीन रसाइली (कराँते)
सागअन्तर्गत कराँतेको ६७ केजी कमुतेमा बाग्लुङ तमानखोलाका नवीन रसाइलीले स्वर्ण पदक जिते । पाकिस्तानी खेलाडी मोहम्मद नासिरलाई फाइनलमा ८–६ स्कोरमा पराजित गर्दै उनले स्वर्ण जितेका हुन् । रसाइलीले आफ्नो स्वर्ण पदक बालाजु डोजाङप्रति समर्पित गरेका छन् । उनले जितेको स्वर्ण कराँतेतर्फको आठौँ स्वर्ण थियो ।
मण्डेकाजी श्रेष्ठ (कराँते)
साग र मण्डेकाजी श्रेष्ठबीच खासै जमिरहेको थिएन । बंगलादेशमा २०१० मा भएको ११ औँ सागमा ढाका पुगेर पनि यिनले खेल्न पाएनन् । टीममा १५ जना राखिएको र त्यतिबेला कोटा प्रणालीअनुसार १० जना मात्रै म्याटमा उतार्ने हुँदा काताबाट मण्डेको नाम हटाइएको थियो । भारतमा भएको अघिल्लो संस्करणको सागमा कराँते नै समावेश भएन । त्यसैले ढल्किँदो उमेरका मण्डेकाजीलाई यो सागमा जसरी पनि स्वर्णको भोक मेट्नैपर्ने दबाब थियो । त्यसैलाई लक्ष्य बनाएर हिँडेका मण्डेले १३ औँ सागमा एक होइन, २ स्वर्ण जिते । मण्डेकाजीले कराँतेको व्यक्तिगत काता र टीम कातामा गरी २ स्वर्ण आफ्नो नाम लेखाए । साथै एउटै सागमा २ स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान पनि उनले आफ्नो नाममा गराए ।
यसअघि सन् २००६ मा धावक राजेन्द्र भण्डारीले ५ हजार मिटर र स्टेपल चेजमा स्वर्ण जित्दै एउटा सागमा २ स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान बनाएका थिए । तर, डोपिङमा असफल भएपछि उनको दुवै पदक खोसिएको थियो । त्यसयता नेपालका कुनै पनि खेलाडीले सागमा दोहोरो स्वर्ण जितेका थिएनन् । मण्डेकाजीको टीम काताका अन्य सदस्यमा महसुस तामाङ र प्रवीण मानन्धर थिए । “११ औँ सागमा अन्तिम समयमा नाम काटिएको क्षणमा खसालेको आँसु १३ औँ सागमा दोहोरो स्वर्ण जितेर परिपूर्ति गरेको छु,” उनले भने, “मलाई १२ औँ सागमा कराते हटाइएको ईख पनि थियो । आफ्नो भूमिमा साग हुँदा गरेर देखाउँछु भन्ने थियो । अन्त्यमा सफलता हात लाग्यो ।”
आयशा शाक्य (तेक्‍वान्दो)
पदक जितिसकेपछि छोरासँग आयशा । तस्बिरः इलिट जोशी
समयमै साग नहुँदाको पीडा भोग्ने खेलाडीमा आयशा शाक्य पनि हुन् । २ सन्तानकी आमा उनी करिअरलाई सुखद अन्त्य दिने सुरमा थिइन् तर १३ औँ सागमा २ स्वर्ण जितेपछि उनमा आशाको सञ्चार भएको छ । सागमा लगातार कीर्तिमानी ४ वटा स्वर्ण जित्ने तेक्‍वान्दो खेलाडी दीपक विष्टकी अर्धांगिनी आयशाले यसपटक २९ वर्षमाथिको एकल पुम्से र २९ वर्षमाथिको युगल पुम्सेमा स्वर्ण जितेर एउटै सागमा २ स्वर्ण जित्ने पहिलो महिला खेलाडीको कीर्तिमान बनाएकी छन् । युगल पुम्सेमा आयशासँगै सञ्जीवकुमार ओझाले स्वर्ण जिते । योसँगै सागमा आयशाको स्वर्ण पदक संख्या ३ पुगेको छ । सन् २०१० को ढाका सागमा स्वर्ण जितेकी आयशा २००६ र २०१६ मा भने फाइनलमा पराजित भएकी थिइन् । २ स्वर्ण उनले आफ्ना २ छोरामा समर्पित गरेकी छन् ।
“सन्तान जन्माएपछि महिला खेलाडी पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्दैनन् भन्ने धेरैलाई भ्रम छ । म यसलाई कसैगरी पनि चिर्न चाहन्थे । त्यसका लागि मिहिनेत पनि गरेँ । अहिले सबैको अगाडि एउटा उदाहरण बन्न पाउँदा खुसी लागेको छ,” उनले सुनाइन् । उनले स्वर्ण जितेको क्षणको साक्षी दुवै छोरा बनेका थिए । छोराहरूले दौडिएर आएर अँगालो हाल्दा आफ्नो आँसु नथामिएको उनले सुनाइन् । आयशा सन् २००६ को दोहा एसियाडकी कास्य विजेता पनि हुन् । हाल तेक्‍वान्दो प्रशिक्षक रहेका आयशाका श्रीमान् दीपकलाई पनि आफूले स्वर्ण जित्दाभन्दा आयशाले २ स्वर्ण जित्दा खुसी मिलेछ तर उनले अन्तिम समयसम्म आयशाको खेल हेर्न भने सकेनन् । “आफूले खेल्दाभन्दा आयशाको खेल हेर्दा मुटु बढी ढुकढुक भयो । सम्हालिन गाह्रो भएजस्तो भयो तर स्वर्ण जितेपछि भने आफैँले जितेजस्तो लाग्यो,” विष्टले भने ।
किरणसिंह बोगटी (एथ्लेटिक्स)
नेपालले आयोजना गरेको १३ औं सागमा एथ्लेटिक्सले सर्वाधिक ३ स्वर्ण जित्यो । पुरुष म्याराथनमा स्वर्ण जित्न नेपालले २४ वर्ष कुर्न पर्‍यो । सन् १९९५ मा भारतमा भएको पाँचौ साफमा टीका बोगटीले स्वर्ण दिलाएयता पुरुष म्यारथनमा नेपालले स्वर्ण जित्न सकेको थिएन । सन् २०१० मा राजेन्द्र भण्डारीले जितेको स्वर्ण ३५ किलोमिटरमात्रै भएकाले रोड रेस मात्रै गनिएको थियो । यसपटक किरणले २ घण्टा २१ मिनेट १७ सेकेण्डमा दूरी पार गर्दै स्वर्ण जिते । पुरुष म्याराथनमा बैकुण्ठ मानन्धरको नाममा २ घण्टा १५ मिनेट ०३ सेकेण्डको दक्षिण एशियाली कीर्तिमान कायमै छ । बोगटीले आफूले जितेको स्वर्ण ३ वर्षअघि दिवंगत भएकी आमा हीरादेवीमा समर्पित गरे ।
पुष्पा भण्डारी (एथ्लेटिक्स)
होचो कदकी पुष्पा भण्डारीले १३ औं सागमा महिला म्याराथनतर्फ स्वर्ण जितेर सफलताको उचाइ सगरमाथाझैं ठड्याएकी छन् । उनी सागमा म्याराथनतर्फ स्वर्ण जित्ने पहिलो महिला बन्न पुगिन् । राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जित्ने क्रममा पुष्पाले २ घण्टा ५० मिनेट ११ सेकेण्डको टाइमिङ निकालिन् । यसअघि कान्छीमाया कोजुको नाममा महिला म्याराथनमा २ घण्टा ५५ मिनेट ५७ सेकेण्डको कीर्तिमान थियो । प्रशिक्षक धनीराम चौधरीको हौसलाले आफूमा आत्मविश्वास बढेको उनले सुनाइन् । ‘धेरैले मलाई होची र मोटी भएकाले दौड सुहाउँदैन भन्थे तर गुरुले मलाई सधैं हौसला दिनुभयो । त्यसैले आज यो जित सम्भव भयो’– उनले भनिन् ।
बंगलादेशीकी रिमी सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली संगीता धामी (माथि)। तस्बिरः ekantipur.com
कुस्तीमा नेपाललाई पहिलो स्वर्ण दिलाउने खेलाडी हुन्– संगीता धामी । यसअघिका प्रतियोगिताहरुमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको कुस्तीले सागका लागि गतिलो प्रशिक्षण पाएन । हेला गरिएको खेलबाट स्वर्ण जितेकी संगीताले ५५ केजी तौल समूहमा बंगालदेशकी रिमी सरकारलाई पराजित गरेकी हुन् । सरकारी असहयोग र हेलाबीच आफ्नै परिश्रम र मिहेनतले स्वर्ण जितेपछि संगीता रिङमै भक्कानिएकी थिइन् । उनले स्वर्ण पदक आफ्नी आमालाई समर्पित गरिन् । उनले भनिन्–‘कुस्तीले पदक दिलाउन सक्दैन भन्नेहरु पनि छन् । मेरो स्वर्णपछि कुस्तीले पनि नेपाललाई चिनाओस् भन्ने चाहन्छु ।’
साग अन्तर्गत बक्सिङको महिला स्पर्धामा नेपालले स्वर्ण जितेको छ । नेपालकी मिनु गुरुङले ५४ केजी तौल समूहमा भारतीय बक्सरलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन् । जारी सागमा नेपालले बक्सिङतर्फ जितेको यो पहिलो स्वर्ण हो । फाइनल भिडन्तमा मिनुले भारतकी शिक्षालाई अंकको आधारमा पराजित गरिन् । यसअघि ४८ केजी तौल समूहमा नेपालकी ललिता महर्जन स्वर्ण जित्नबाट चुकेकी थिइन् । उनलाई भारतकी श्रीरिभाषनले पराजित गरेकी थिइन् ।
सनिल शाही (बक्सिङ)
१३ औं सागमा बक्सिङमा स्वर्ण पदक जितेर नेपालले आफ्नो पदक संख्या ५० पुर्‍यायो । पुरुषतर्फको ६० केजी तौल समूह अन्तर्गत सनिल शाहीले स्वर्ण जितेका हुन् । शाहीले भारतका बक्सर वीरेन्दर सिंहलाई अंकका आधारमा हराएर स्वर्ण जितेका हुन् ।
भुटानलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै नेपाल १३ औँ साग फुटबल च्याम्पियन बनेको छ । नेपाललाई जिताउन अभिषेक रिजाल र सुनिल बलले १/१ गोल गरे । १६ औँ मिनेटमा अभिषेकले पहिलो गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिएका थिए । तर भुटानका कप्तान चेन्चो ग्यालसेनले ३६ औँ मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरी बनाए । नेपालका तर्फबाट ५३ औँ मिनेटमा सुनिलले गोल गरेपछि नेपाल विजयी बन्यो ।नेपालले लगातार दोस्रो पटक साग फुटबलमा स्वर्ण पदक जितेको हो ।
प्रकाशित: मंसिर २२, २०७६
ट्याग: दक्षिण एसियाली खेलकुदसागनेपालफुटबल